[APK] can nwere ike ibudata Allo, ngwa ọhụrụ izipu ozi Google | Gam akporosis
[APK] Anyị nwere Allo, budata ngwa izipu ozi ọhụụ Google ugbu a
Google kwere nkwa na anyị ga-enwe Allo tupu oge ọkọchị agwụ, na ọ bụ kpọmkwem taa, na Septemba 21, mgbe ọ mere ngwa izipu ozi ọhụụ ya nke ga-nzọ na Google Assistant ma bụrụ akụ mmetụta uche nwere ọtụtụ uru na emojis.
Ọhụrụ chat ngwa bụ ọrụ na ndị gị nke na-ahụghị bọtịnụ "Wụnye" na Playlọ Ahịa Google, ị nwere ike ibudata na mgbe ahụ ngwa iji chọpụta ngwa nke abụọ maka nkwukọrịta n'etiti ndị mmadụ mere site na Mountain View mgbe Duo gasịrị.
1 Allo di ugbu a na eze
2 Ibido na Allo
Allo di ugbu a na eze
Google weputara otu weebụsaịtị ohuru ebe ọ na-akọwa omume ọma na uru niile nke ngwa a na-abịa na echiche nke agha ugbu a na WhatsApp jikọtara ya na nọmba ekwentị, inwe ike ịmalite ma nata SMS ma nwee n'etiti ndị ọrụ Google Assistant, otu n'ime ọrụ Google na-etinyekwu ịhụnanya na mbọ.
E nwere ya jikọọ na nọmba ekwentị gị E mebere ya, maka ugbu a, maka smartphones. A ga-egosiputa kọntaktị niile na-eji Allo na-akpaghị aka, na ndị na-anaghị eme ya, nwere ike ibudata na ngwa ahụ.
El etiti etiti nke Allo ọ bụ Google Assistant, nke bụ nnukwu akụkụ nke gam akporo na Google n'ozuzu maka afọ ole na ole sochirinụ. Ọ na-enye ozi bara uru ma jikọta ya na ihe ndị gbara ya gburugburu na nzaghachi sitere n'okike nke mkparịta ụka ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị jụọ maka ihu igwe echi, ọ ga-arụpụta nzaghachi sitere n'okike dị ka a ga - asị na ị na - agwa mmadụ. Ọ bụ onye nkata inyeaka ị nwere ike iji n'oge ọ bụla na mkparịta ụka.
Ibido na Allo
Site na inwe Google Assistant dị ka onye bụ isi nke ngwa a, site na mgbe ị malitere Allo, ị ga-enweta ya dị ka ọ bụ windo mkparịta ụka ọzọ na kọntaktị. Ọ bụrụ na ị pịa ya, ọ ga-anabata gị ma jụọ gị ka ị nye ya ikikere iji GPS nke ngwaọrụ iji chọta gị wee si otú a na-enye nkọwa zuru oke.
Eme nke a, Google Assistant ga-enye usoro nke kaadị nke ahụ na-egosi usoro ajụjụ ị nwere ike ịjụ metụtara ụlọ oriri na ọ questionsụ knowledgeụ, ajụjụ gbasara ihe ọmụma n'ozuzu, omume (tinye ncheta / mkpu), amụma ihu igwe, egwuregwu, njem, ntụgharị asụsụ, akụkọ na ọbụlagodi ihe na-atọ ọchị dịka vidiyo, onyonyo na njakịrị. Onye enyemaka ga-anwa ịnye ozi niile site na nkasi obi nke gị na mmadụ ịkparịta ụka ka onye ọ bụla n'ime gị nwee ike ịnweta ya site na mkparịta ụka ahụ.
Allo nwere a FAB bọtịnụ dị na ala aka nri nke ahụ ga-eduru gị na ihuenyo ọhụụ ebe ị ga-enwe kọntaktị niile na ikike ịmalite nkata otu, kparịta ụka na nzuzo ma ọ bụ mepee mkparịta ụka na Google Assistant. Enwekwara ogwe aka n'akụkụ nke na-emepe na swipe iji gaa profaịlụ, kọntaktị egbochi na ntọala. Nke ikpeazụ na-enye gị ohere ime ka ụda ozi, ozi, gbanwee ụda ha, ịma jijiji ma budata faịlụ multimedia mgbe niile.
Google Allo dị na ụbọchị izizi ya iji wee malite mkparịta ụka na onye enyemaka ị ga-eji asụsụ Anglo-Saxon. Site na oge ọ dị site na Playlọ Ahịa Google, a ga-arụ ọrụ Google Assistant n'ọrụ, nke nwere iwu olu ahụ niile anyị na-ejikarị na Google Ugbu a, yabụ ọ ga-abụ ihe gbasara awa na anyị nwere ike inwe mkparịta ụka sitere n'okike na onye inyeaka.
Nwere ike ibudata ya na Playlọ Ahịa Google, mana m kwuru, ọ bụrụ na ịnweghị ya, budata APK n'okpuru ka ị nwere Allo na ama gị ma gbaa ndị enyi na kọntaktị gị ume ka ha jiri ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » [APK] Anyị nwere Allo, budata ngwa izipu ozi ọhụụ Google ugbu a
Ọfọn, na m android ọ na-etinye posimamente !!!!
Gbalịa ịwụnye APK!